Rob Bainer: “Uefa Waa Labo Wajiilayaal – Maaha Inay Mamnuucaan Calanka Falastiin Oo Ay Ogolaadaan Calanka Yahuuda,” | Hangool News
Rob Bainer: “Uefa Waa Labo Wajiilayaal – Maaha Inay Mamnuucaan Calanka Falastiin Oo Ay Ogolaadaan Calanka Yahuuda,”
Wariyaha shabakada Goal.com Robin Bairner ayaa maqaal ka qoray maanta laba wajiilinada UEFA ee la xiriirta calamada wadamada ee lagu soo bandhigo qaab ka mid ah tartamada UEFA iyadoo dacwadii ugu danbeysay lagu soo oogay Celtic ka dib markii ay jamaahiirtooda soo bandhigeen calamada Falastiin kulankii ay la ciyaarayeen kooxda yahuuda ee Hapeol Be’er Sheva.
UEFA ayaa sheegtay inay talaabada ay qaadeen jamaahiirta UEFA u aragtay mid ka soo horjeeda qawaaniinta u degsan ee reebeysa in la soo bandhigo fariin aan xiriir la laheyn isboori oo taabaneysa siyaasad, falsafad ama diin.
Laakiin sharciga UEFA ma ahan mid loo siman yahay sida uu ku doodayo Robin Bairner: “Sida loogu arkay in calan Falastiin la ruxo inay tahay mid siyaasadeed oo ka soo horjeeda yahuuda hadana waa in loo arko taageerayaasha Ajax ee had iyo jeer ruxa calanka yahuuda inay iyadana tahay mid siyaasadeed oo ka soo horjeeda Falastiin, xitaa haddii uu ujeedadooda ay tahay inay soo bandhigayaan inay dad yahuud ah yihiin.”
Wuxuu qoraalkiisa raaciyay: “Xalka dhibaatadan waa mid sahlan: Ama waa in calamada oo dhan laga mamnuuco kulamada kooxaha Yurub waana talaabo aysan dad badani dooneynin ama waa in laga dabco sharciyadaan laba wajiilenimada ah. Waa wax sidaas u sahlan.”
Rob Bairner waxa uu sidoo kale tusaale u soo qaatay labo wajiilenimada UEFA arinta calanta Sanyera ee Catalan, iyadoo Barcelona dhowr jeer lagu ganaaxay inay taageerayaashooda calankaas ruxeen kulamada Champions League. UEFA waxa ay u aragtay in calankaas uu yahay mid siyaasadeed oo ka soo horjeeda dadka Isbaanishka, laakiin buu yiri haddii Atletico iyo Real ay kulamada Champions League taageerayaashooda soo bandhigaan calan Isbaanish ah looma arko inay siyaasad tahay oo ka soo horjeeda Catalan.